I-Linq: UMboneleli wakho woNxibelelwano lweeNgingqi eziPhantse (NFC) Iimveliso zeKhadi loShishino | Martech Zone
Ukuba kudala ufunda indawo yam, uyazi indlela endonwabe ngayo ndifumana iintlobo ezahlukeneyo zamakhadi oshishino. Ndinamakhadi okuphawula emva kwawo, amakhadi asikwere, amakhadi esinyithi, amakhadi alaminethiweyo… ndiyazonwabela kakhulu. Ewe kunjalo, ngokutshixa kunye nokungakwazi ukuhamba, kwakungekho sidingo sikhulu samakhadi oshishino. Ngoku ukuhamba kuvula, nangona kunjalo, ndaye ndagqiba kwelokuba lixesha lokuba ndihlaziye ikhadi lam kwaye ndifumane ulungelelwaniso.
Inye kuphela into endihlala ndiyoyika kukuba mangaphi amakhadi eshishini ekufuneka ndiwathengile kwaye mangaphi ekufuneka ndizise kumnyhadala ngamnye. Kude kube ndenzekile ILinq. I-Linq inelayini eyahlukileyo yemveliso yamakhadi oshishino edijithali afakelwe i-NFC. Ukuba ubundilandela okwethutyana, uyazi ukuba ndizamile ngeseti yamakhadi eNFC ngaphambili kodwa ayisebenzi. Inkampani ibinemicimbi emininzi ebaprinta kwaye i-URL yokuya kwindawo ibingaphantsi kokungaqhelekanga.
I-Linq yahlukile, ibandakanya usetyenziso lweselfowuni ukwakha iphepha lasimahla lokufika (okanye iphepha elihlawulelweyo ngolunye uphuculo oluhle) kunye noluhlu lwezixhobo onokuzithenga ezifakwe kwi-NFC. Iphepha lakho lokufika linokuba neefayile zakho zokunxibelelana, amakhonkco entlawulo (iVenmo, iPayPal, okanye iCashApp), kwaye wenze ukuba undwendwe lwakho lukhuphele ikhadi lakho loqhakamshelwano ukuze likongeze ngqo kunxibelelwano lwabo.
NgeLinq Pro, umrhumo kwimveliso yabo yokutsiba, unga:
Cwangcisa naliphi na iphepha lokufikela ongathanda libe ngaphakathi ezikhwela ukhetho.
Yongeza umxholo owongezelelweyo kwiphepha lokufika kweLinq. Ndongeze ividiyo yeYouTube kodwa unokongeza iintlanganiso zentlanganiso, iSpotify okanye isidlali somsindo.
Yongeza ifom kwiphepha lakho ukufaka ulwazi olongezelelweyo.
Ngamakhadi abo ePremiyamu kunye nolunye ulwenziwo, ndikwazile ukwakha ifayile ye- ikhadi lomsebenzi ndinophawu lwam kuyo (ifoto engentla) ukuba ndinokuncamathela kwimeko yam yefowuni emva koko ndikhuphe nanini na umntu ebuza okanye ndinika ikhadi lam. Endaweni yokunika umntu ngamnye ikhadi leshishini, ndingalicofa kwifowuni yakhe okanye baskene ikhowudi ye-QR ngasemva kwaye baziswe kwiphepha lokufika nalo lonke ulwazi lwam kunye nekhonkco lokukhuphela ekunxibelelaneni nalo ukungenisa Iinkcukacha zonxibelelwano ngqo kwifowuni yabo!
Douglas KarrUkufika kwiphepha kwiLinq
Iimveliso zeKhadi leShishini eliDibeneyo leNFC
I-Linq ayiboneleli nje nge-premium khadi endiyithengileyo, eneneni banokukhetha okukhulu kweemveliso abanokukhetha kuzo:
Ikhadi leLinq - uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ekusebenziseni amakhadi apho unokuzifumana zicace, uprinte ilogo yakho kuzo, okanye ube noyilo lwesiko olupheleleyo.
ILinq isongo - isongo esilula esifakwe kwi-NFC… cofa nje isongo kwifowuni yakho kwaye iphepha lokuya kuvulwa.
Ibhendi yaseLinq yeApple Watch- ibhendi yeApple Watch ebethelelwe kwiNFC… cofa nje ibhendi kwifowuni yakho kwaye iphepha lokuya kulo liyavula.
Ikhonkco leHub -I-desktop okanye ihabhu yetheyitile enikwe amandla i-NFC kwaye inekhowudi ye-QR kuyo eyenzelwe abantu abatyelele idesika okanye idokodo lakho.
Qhagamshela Tap -Iqhosha elincinci elipholileyo le-NFC onokuthi ulincamathele ngasemva kwifowuni yakho okanye kwimeko yefowuni. Ezi zinokulungiswa ngekhowudi yeQR okanye ilogo yakho.
I-Linq yamaqela ikwenza ukuba ukwazi ukulandelela ukusebenza kwenethiwekhi yamaqela akho njengoko esasaza ulwazi lwabo lokunxibelelana nabanye.
Ukuba uqhuba umsitho wentlalontle, iLinq ibonelela ngeebheji kunye neehabhu zababekho kunye nabathengisi. Unokulandela umkhondo wonxibelelwano kunye nokuzibandakanya kubo bonke abazimase, abaxhasi, kunye nabathengisi!
Fumana okunye malunga neemveliso zeLinq kunye neminikelo kwivenkile ekwi-Intanethi:
Ukubhengezwa: Ndisayine njengeNxusa laseLinq kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: Androidikhadi leshishiniikhesappikhadi lokunxibelelanaifayile yoqhakamshelwanoIinkcukacha zoqhakamshelwanoIPhone iosqhawulalinqlinq proNFCIbhendi ye-nfc yeapilenfc isongoIkhadi leshishini le-nfcamakhadi eshishini e-nfciqhosha le-nfcyiza